संसद पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा सघाएर प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई दाहाल-नेपालको प्रस्ताव
काठमाडौं, १ माघ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहले प्रस्ताव राखेको छ । बुधबार साँझ दुई घण्टासम्म चलेको नेकपा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल र देउवाको भेटमा यस्तो संवाद भएको हो ।
नेकपा अध्यक्षद्वयले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा र नहुँदाको दुवै अवस्थामा सहकार्य गर्न देउवालाई आग्रह गरेका हुन् । छलफलमा देउवाले संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा भने सकरात्मक जवाफ नदिएको नेकपा स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा भने पार्टीमा सल्लाह गरेर निर्णय दिने देउवाले भनेका छन् ।
‘म तपाईंहरुको प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा राख्छु र आउने निष्कर्षबारे तपाईंहरुलाई जानकारी गराउँछु,’ देउवाले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए । भेटमा दाहालले देउवालाई चुनावतिर धेरै नलहसिन र लोकतन्त्र बचाउने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
‘तपाईं किन ओलीको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमको साक्षी बन्नुहुन्छ ? यो कदमलाई समर्थन गर्नुभयो भने तपाईंले जीवनभरी जवाफ दिइरहनुपर्छ ? के तपाईंलाई पार्टी फुटेको बेला ओलीले वैशाखमै चुनाव गर्छन् भन्ने लागेको छ?,’ दाहाल-नेपाललाई उद्धृत गर्दै देउवालाई प्रश्न गरिएको पूर्वमाओवादी समूहका एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री बन्न ओलीकै पछि लाग्नु नपर्ने र आफूहरुले सहयोग गर्ने दाहाल-नेपालले प्रस्ताव गरेका थिए । अध्यक्षद्वयले देउवाको आशंका मेटाउँदै प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि भन्दा पनि पुनःस्थापनाको लागि मात्रै ओलीसँग कुनै शर्तमा सहकार्य हुनसक्ने बताएका थिए । देउवाले नेकपा फुटिनसकेको र पुनः दाहाल-ओली मिल्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
देउवाले आफ्नो समूहका अनौपचारिक भेटहरुमा दाहाल र ओलीको जोडी फुटेको बेला मात्रै कांग्रेसको भविष्य उज्ज्वल हुने बताउँदै आएका छन् ।